Abakhiqizi nabahlinzeki bePet Paw Nail Clipeer | Ifektri yaseChina Pet Paw Nail Clipeer
Ifayela le-Pet Nail liphephile futhi kalula lifinyelela isipikili esibushelelezi esiphelile ngomphetho weDayimane. Amakristalu amancane afakwe ku-nickel ngokushesha afaka izinzipho zesilwane. Umbhede wefayili wezilwane ezifuywayo uhlanganiswe ukuze ulingane nesipikili.
Ifayili yezipikili zezilwane inesibambo esinethezekile futhi esinokubambelela okungasheleli.
Ikati Uzipho Nail Clipper
1. Izindwani eziqinile zaleli kheji uzipho lwesipikili zenziwe ngensimbi engagqwali esezingeni eliphezulu, inamandla anele okusika izinzipho zekati lakho ngokusikwa okukodwa nje.
2. Isigaxa sezinzipho sekati sinengidi yokuphepha ekwenza ugweme ingozi yokulimala ngengozi.
3. Isigaxa sezinzipho sekati sibonisa ukunethezeka, ukubambelela okulula, ukungasheleli, izibambo ze-ergonomic ezihlala ziphephile ezandleni zakho.
4. Ikhekhe lethu elilula nelisebenzisekayo eliziphozelayo lenzelwe izilwane ezincane. Futhi, ingathwalwa kalula nomaphi lapho uhambela khona.
Ifayela le-Pet Nail liphephile futhi kalula lifinyelela isipikili esibushelelezi esiphelile ngomphetho weDayimane. Amakristalu amancane afakwe ku-nickel ngokushesha afayela isilwane'iminenke. Umbhede wefayili wezilwane ezifuywayo ukhonjelwe ukulingana nezipikili.
Isicefe sekati lesipikili esingenansimbi
Amacembe okusika asetshenziselwa ukwenza ikliphu yethu yezipikili zekati enziwe ngensimbi engagqwali eqinile ukuqinisekisa ukuthi ahlala isikhathi eside futhi ayasebenziseka eminyakeni ezayo.
Isicefe sokucheba ikati lensimbi esingenasici sinezimbambo zenjoloba ezivimbela ukushelela lapho usika.
Ngenkathi insimbi yezinsimbi engagqwali isikhumba incanyelwa abagcini bezinwele abangochwepheshe, futhi zibalulekile kubanikazi bezinja namakati nsuku zonke. Sebenzisa le nsipho encane yokusika ikati lensimbi engagqwali ukugcina izinzipho zesilwane sakho ziphilile.
Ikati elincane le-Nail Clipper
Izinsimbi zezipikili zethu ezingasindi zenzelwe ukuthi zisetshenziswe ezilwaneni ezincane, njengezinja ezincane, amakati nonogwaja.
Intambo yesinqe sekati encane yenziwe ngensimbi engagqwali ngakho-ke i-hypoallergenic futhi ihlala isikhathi eside.
Isibambo sesipikili sekati elincane siqediwe ngesembozo esingashibiliki, Ikuvumela ukuthi ubabambe ngokuphepha nangokunethezeka ukuze uvikele izingozi ezibuhlungu.
Isikere sekati lobuchwepheshe
Isikele sekati eliqeqeshiwe lenzelwe i-ergonomically ngensimbi engagqwali ebukhali insimbi eyisiyingi eyindilinga. Uzokwazi ukubona okwenzayo futhi kukusize unqume ukuthi udinga malini, kugwema ukungcola okunegazi ngisho ngaphandle kwenzwa esheshayo.
Isikere sezinzipho zekati lobungcweti sineziphatho ezikahle nezingasheleli Siqinisekisa ukusetshenziswa okulula futhi sigweme izingcwebo nokusikeka ngengozi.
Usebenzisa le scissor yekati yobungcweti futhi usike uzipho, izipikili zomntanakho, kuphephile futhi kufanele.